Ungalithenga kanjani ijazi lemvula 1. Indwangu Ngokuvamile kunezinhlobo ezi-4 zezinto zejazi lemvula, ngayinye inezinzuzo nezinkinga zayo, ezingathengwa ngokwezimo zangempela. Naka ukuhlukanisa ukuthi indwangu ye-raincoat iyisetshenziswa esenziwe kabusha yini. Izinto ezenziwe kabusha zinokukhethekile ...
Ungaligcina kanjani ijazi lemvula 1. Ithephu ijazi lemvula Uma ijazi lakho lemvula liyijazi lemvula elinerabha, kufanele ubeke izingubo ezisetshenzisiwe endaweni epholile nomoya ngokushesha ngemuva kokuyisebenzisa, bese usomisa ijazi lemvula. Uma kukhona ukungcola kwijazi lakho lemvula, ungabeka ijazi lakho lemvula phezu kwetafula eliyisicaba, bese ukhuza kancane nge ...
Thina bantu abadala sihlale siphatha isambulela lapho sisendleleni. Isambulela asikwazi umthunzi kuphela, kepha futhi sivimbela imvula. Ukuthwala kalula kungenye yezinto ezibalulekile ekuhambeni kwethu, kepha kwesinye isikhathi akulula kangako ukuthi izingane zibambe isambulela. Kuyadingeka ukuthi izingane zigqoke ijazi lemvula le-childr ...